Kuwana chigaro kunhandare yendege kuri nyore kwazvo asi hakusi kuvimbiswa kuti kunowanikwa panguva chaiyo yekuda kwechikumbiro cheminiti yekupedzisira. Kuona a wiricheya inowanikwa panguva yekushaiwa, mumwe anofanira kubata iyo yendege saka kuti vagone kuronga chikumbiro chako chezuva rekutiza kwako. Zvakawanda airways zvinoda kukumbira kwemaawa makumi maviri nemana kuitira kuti vawane nguva yakawanda yekuvimbisa midziyo uye vashandi varipo panguva yakatarwa yekuda. Paunosvika panhandare yendege, zvinokurudzirwa kubata pfungwa dzevashandi kuti vatungamirirwe kunzvimbo yakakodzera. Mumwe anofanirwa kutarisa nevashandi vari kushanda padhesiki kuti vataure kusvika kwako uye zvaunoda zvakakumbirwa.
Kunyangwe vamwe vanhu vangakanganwa kana kusave neruzivo nezve iyo mabasa anopiwa nokuda ndege ichiri kukurudzirwa kutaura zvido zvechero ipi passenger. Ndege zhinji dzine mawiricheya akaiswa parutivi rwe passenger kushandisa kunyangwe pasina chikumbiro vasati vasvika kuti vaone zvakakosha zvinodiwa zve vafambi anozadziswa. Dzimwe nguva vanhu vanoshandisa iyo mavhiripu nekuda kwezvikonzero zvako uye kana pasina chikumbiro chakaiswa hapana chero chakaiswa parutivi icho mutakuri chaiye panguva iyoyo chaiyo.
Airlines haizopa mawiricheya emagetsi kune vafambi vanoshaya, saka, ndizvo yakakosha kukumbira mudonzvo unogona kubatsira iyo passenger kana kuti vafambe nemumwe munhu anogona kubatsira. Izvi zvinovimbisa iyo passenger haawane kuoma vachiri parwendo nekuda kwekuti ivo vachazowana rubatsiro pakarepo pazvinenge zvichidiwa. Zvikonzero zvikuru izvo ndege dzinopa manual mavhiripu imo nekuti iwo anodhura uye ari nyore kuita maneja munzvimbo diki senge bhiriji rekukwira nendege. Zvisinei, iyo kambani Karman ane dhizaina mawiricheya izvo zvinouya muhukuru hwakasiyana kutendera vashandisi kuti vafambe-fambe vakasununguka vasina kupira nyaradzo kana yakakosha zvinhu inopihwa mune yavo mavhiripu. Nemhaka mavhiripu kuvakwa mumadiki madiki mamwe ndege kubvumira wiricheya vashandisi kupinda muairport vari vega wiricheya kumusoro kusvikira kukwira ndege. Izvi inobvumira wiricheya vashandisi kuti vagadzikane kuburikidza nehurongwa hwekutarisa mukati uye kumirira kukwira ndege.
zvose airways vane kufarira kwakanyanya kwavo vafambi uye ndichavabatsira napose paanogona zvinogoneka asi kutaurirana uye kuronga kwekutanga kunogona vimbisa vafambi kuva neruzivo rwakakura nguva parwendo nendege nechero ipi nendege zvemumba kana kune dzimwe nyika.